Dadka ka barakaca dalka DRC oo ka badan kuwa bariga dhexe - BBC News Somali
Image caption Dadka ku dhibaateysan dalka Congo
Collaada ka taagan dalka dalka Jamhuuriyadda dimoqraadiga ee Congo ayaa sannadkan dad gaaraya 1.7 milyan oo qof ku qasabtay inay ka qaxaan guryahooda, taasi oo sababtay wax hey'adaha gargaarka ay ugu yereen xassarad ballaaran.
Tani waxay la sheegay inay ka dhigantahay in sannadka xiga ee 2018-ka ay kasii dari doontaa xaaladda barakacayaasha ee dalka DRC Congo.
Dalkan ayaa waxaa halakeeyay dhowr sano oo xassilooni darro ah, iyadoo kooxaha kasoo horjeeda dowladda ay isku dayayaan inay la wareegaan gacan ku heynta dalkaasi, waxaana xaaladda hadda jirta uga sii daray kadib markii ay qabsoomi weyday doorashadii sannadkii hore.
Agaasimaha hey'adda Norwegian refugee council ayaa sidookale sheegay in dadka kasoo barakacaya Jamhuuriyadda dimoqraadiga ee Congo ay ka badanyihiin dadka kasoo barakacaya collaadda dalalka Suuriya, Yemen iyo Ciraaq.
Warbixin ay dhawaan soo saareen xarun laga la socda dadka gudaha ku barakacay ayaa lagu sheegay in maalin walba dalkaasi ay ka barakacaan ku dhawaad lix kun oo qof.